Indawo evaliweyo yokupholisa iluphu: Icandelo leMichiza
Icandelo leMichiza libandakanya uthotho lweenkqubo ezintsonkothileyo ezinje ngokuFudumeza, ukupholisa, ukujija, ukuPhuma komphunga kunye nokwahlukana. Umzi mveliso weekhemikhali lelinye lawona macandelo amatsha kunye nokukhula ngokukhawuleza. Ayikwazi ukusebenza ngaphandle kwenqaba yokupholisa, kwaye iyinxalenye ebalulekileyo yoShishino lweKhemikhali, apho Ubushushu kufuneka buchithwe ukuya emoyeni okanye iiFluids kufuneka zijijiswe ngokufanelekileyo ngobuncinci bamandla kunye nelahleko yaManzi.
Ukunyuka kwamandla kunye neendleko zamanzi kuqhuba iCandelo leMichiza kukhangela itekhnoloji entsha enokuthi yenze ukuba ishishini lizinzile ngakumbi kwaye linciphise indleko zeMveliso.
Kulindeleke ukuba inkqubela phambili kwiindawo ezinje nge-biotechnology, iiseli zepetroli, itekhnoloji yendalo esingqongileyo kunye nezixhobo ezikrelekrele ziya kukhokelela ekuhlangabezeni iimfuno ezizayo kwihlabathi liphela.
Itekhnoloji ethembekileyo yokutshintsha umzimba kwiShishini leMichiza, ngokusebenza okuzinzileyo kuzisa i-SPL ngaphambili. Imeko yethu eyomeleleyo yetekhnoloji yobugcisa ibonelela ngokufanelekileyoKuvaliwe i-Loop Cooling Towers / i-Condensers evaporative kunye neHybrid Coolers.
Isisombululo esenziwe ngezixhobo ze-SPL kunye nezixhobo zokusebenza sizisa izibonelelo ezinkulu ngokusebenza kakuhle kwamandla, uzinzo, uKhuseleko naManzi, kuba zivumela ukupholisa iinkqubo zeMveliso ngobuncinci benkunkuma yezixhobo, ulawulo oluchanekileyo kunye nokugcinwa kwamacandelo enqaba yokupholisa ixesha elide nelizinzileyo. yexesha.